ပရ ဟိတတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့လူတွေကို ကူညီဖို့ မရရအောင်ပြန်ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ ယုန်လေး – Burmese.asia
Homepage / Celebrity / ပရ ဟိတတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့လူတွေကို ကူညီဖို့ မရရအောင်ပြန်ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ပရ ဟိတတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့လူတွေကို ကူညီဖို့ မရရအောင်ပြန်ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒါရိုက်တာ၊သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ ယုန်လေးကတော့ လတ်တလောမှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက (၁)နှစ်ပိတ်လိုက်တာကြောင့် အနုပညာအလုပ် တွေ ကို ဘောင်အတွင်းကနေ အနည်းအကျဉ်းသာလုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယုန်လေးကို ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အခုချိန်ထိတိုင် တစ်ခဲနက်ဝန်းရံနေကြပြီး အားပေး စကားတွေပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ယုန်လေးက သူနောက်ထပ်လုပ် ဆောင် မယ့် အစီအစဉ်တွေကို အောက်ပါအတိုင်းရေးသားပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ယုန်လေးက”အားလုံးကောင်းသော နေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ခင်များ .အရင်လို Post တွေပြန်တင်ပါ တော့ မယ် အချိန်ကာလ တစ်ခုမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေများစွာကြုံခဲ့ပါတယ် .အနားမှာရှိပေးတဲ့ မိ သား စုလို သူငယ်ချင်းတွေ Ph နဲ့ရော Messenger မှာရော အားပေးတဲ့ တစ်ယောက်စီတိုင်းကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ် .ကျွန်တော် တစ်နှစ် အပိတ်ခံရတယ်အပေါ်မှာ ဘာမှ ပြောစရာမရှိ ပါဘူး .ဒါပေမယ့် စားဝတ်နေရေး နဲ့ကျွန်တော် တာဝန်ယူထားတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ကျွန် တော် ပြန်ရုန်းကန်မှ ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် .ကျွန်တော်ရှင်သန်နေမှ ရပါမယ်
We Love Yone Lay/We stand with Yone Lay ဆိုပြီး အားပေးတဲ့အယောက်စီတိုင်းကို လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်.ကိုယ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ပုံ တက်တူးထိုးထားတဲ့ လူတွေ အတွ က် လည်း အစီစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ် .We Love Yone Lay/We stand with Yone Lay ဆိုပြီး အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ထားပြီး ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ လူတွေ နဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် ထောက်ပံ့ ကြေး သူတို့တက်နိုင်သလောက် လစဉ်ပေးမယ် ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးပြောလာတော့ ပျော်ပြီးကြ ည်း နူး မိသလို ဝမ်းလည်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ် .ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ပဲ သူများကို ထော က်ပံ့ချင်တာ . ကူညီချင်တာ “ကျွန်တော် မစွမ်းနိုင်တော့မှာကို အရင်လို ပြန်မရပ်တည်နိုင်မှာကို အကြောက်ဆုံးပဲ .စရံ ယူစရာ ရိုက်စရာ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ပျက်ခဲ့ပါတယ် .အခု လုပ်လို့ရတဲ့ ဘောင်ထဲက အလုပ်လေးတွေကို အရင်ထက် ပိုကြိုးစားပြီး လုပ်ပါမယ် .FB မှာ Post တင်ပြီး ကျွန်တော် ကြေငြာပေးလို့ရပါတယ် .ရုပ်ရှင်အစည်းရုံးကို စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ရုပ်ရှင်အစည်း ရုံးကို လျောက်လွှာတင်စ ရာ မလိုပဲ FBအတွက် ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ပေးလို့ရပါတယ် Ph နဲ့ ပဲ ရိုက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် .လူဦးရေ လည်း ရှုတင်မှာ မများပါဘူး .ဒါလေးတွေ တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်
.ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့(Original Gangster/Special 9/သတိအန္တရာယ်ရှိသည်/ကိုယ့်သမိုင်း ကို ယ် ရေးကြသူများ/Mafia City/Yone Lay Page တွေနဲ့/Yone Lay Account အားလုံးပေါ င်းရ င်Follower 3M လောက်ရှိပါတယ် .ဒါလေး နဲ့ ကျွန်တော် ပြန်ရပ်တည်မယ် .အရင်လို ပရ ဟိ တ တွေ လိုအပ်တဲ့ လူတွေကို ကူဖို့ မရရအောင် ပြန်ကြိုးစားမယ် .အဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ကို ကြော်ငြာလေးတွေအပ်ပါ အလုပ်လေးတွေ ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်. တတ်စွမ်း သလောက်အ ကော င်းဆုံးကြိုးစားပေးပါမယ် .အားလုံး Peace “ဆိုပြီး ရေးသားထားတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအာ လုံး အ မႈိက္ေကာက္ ၾကဖို႔အတြက္ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ ဆီႏြန္
Next post ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္း အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဟု သတိေပး